Ravalomanana mivady : Mamaky ady amin’Antananarivo -
AccueilRaharaham-pirenenaRavalomanana mivady : Mamaky ady amin’Antananarivo
Ho ben’ny tanàn’Antanarivo renivohitra no nifidianan’ny vahoakan’Antananarivo an’i Lalao Ravalomanana fa tsy hamelona ny antoko Tim hanomana fifidianana. Ankehitriny mantsy dia lasa manatevin-daharana manampy an-drangahy vadiny amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan’ny fotoana sisa no ataon’ity ben’ny tanàna voafidy teto an-dRenivohitra ity. Tany Betafo nanamasaka ny fihaonan’ny antokom-badiny izy ny faran’ny herinandro teo. Rahampitso sy rahafakampitso, mety ho any amin’ny faritra hafa.
Efa tsy misy raharahian’ity ben’ny tanàna Tim ity ny renivohitra nahalany azy intsony ve ? Tena mihisatra sy tsy mandeha mihitsy mantsy ny fampandehanan-draharaha eo anivon’ny kaomina eo : “ nisy fotoana efa tsy nisy intsony ny taratasy ampiasaina eny anivon’ny boriborintany manarina ny fandoavam-bola, ….mihisatra be izay tsy izy ny fanarenana fotodrafitrasa tokony iantsorohan’ny kaomina”.
Tsy hoe fitsikerana be fahatany ny fihetsiky ny Ben’ny tanàna Lalao Ravalomanana, fa hitan’ny rehetra ny tsy firaharahiany ny andraikitra tokony hataony. Ny resaka politika sy fandratoana ady amin’ny fitondrana foibe no tena nandaniany andro : “ raharaha Antanimbarinandriana, Andohatapenaka”
Ny faran’ny herinandro teo, dia hita niharihary ihany koa fa noesorina tsikelikely ilay soratra hoe “Antananarivo” tetsy Ampamarinana. Misy dikany lehibe ny fanesorana izany, satria toa milaza fa potehina tsikeliky Antananarivo.
Ny momba ny mpivarotra amoron-dalana, izay vahoaka mipetraka eto Antananarivo, indrindra indrindra eny amin’ny faritra iva ny ankamaroany dia mahatsiaro tena ho tsy misy mpiraharaha mihitsy raha vao tonga teo amin’ny toerany Lalao Ravalomanana. Vao mainka mantsy, nanakaraman’ny Cua vondron’olona manokana mihitsy ireo mpivarotra amoron-dalana ireo mba hampijanona ny fitadiavam-bolany. Vahaolana maharitra ho azy ireo anefa no nandrasany tamin’ny Cua fa tsy fanenjehana sy herisetra.